Jizo Bosatsu: I-Bodhisattva Okhusela abantwana
I-Bodhisattva yabantwana abasweleyo
Igama lakhe lesiSanskrit nguKsitigarbha Bodhisattva . E-China u-Dayuan Dizang Pusa (okanye uTi Tsang P'usa), e-Tibet yena u-Sa-E Nyingpo, kwaye eJapan unguJizo. Nguye bodhisattva owathembisa ukungena eNirvana ade iHolen Realm ingenanto. Isibhambathiso sakhe: "Kuze kube yilapho izihogo zichithwa ndiya kuba ngumBuddha; kude kube zonke izinto ezigcinwayo ndiya kuqinisekisa uBodhi."
Nangona i-Ksitigarbha ngokuyinhloko iyaziwa ngokuba yi-bodhisattva ye-Hell Realm, uhamba ukuya kuzo zonke ii-Realms Six kwaye ungumkhokeli kunye nomgcini wezo zinto phakathi kokuzalwa kwakhona.
Ngomfanekiso weklasi weklasi, uboniswa njengomloki ophethe ijoli efuna ukuzalisa umnqweno kunye nabasebenzi abaneemarinxi ezintandathu, enye kwindawo nganye.
I-Ksitigarbha inendawo ekhethekileyo eJapan, nangona kunjalo. NjengeJizzo, i-bodhisattva (i- bosatsu eJapan) sele ibe yinto yamadoda athandwayo kakhulu eBuddhism yaseJapan . Amanani oMatye aseJizzo ahlala eetempileni, iziqhagamshelana zedolophu kunye neendlela zelizwe. Ngokuphindaphindiweyo iiJizzos zimi ndawonye, ​​ziboniswa njengabantwana abancinci, bembethe iibhsi okanye iimpahla zabantwana.
Ababhenkethi bafumane iifoto ezibukekayo, kodwa ininzi ibalisa ibali elibuhlungu. Iifowuni kunye nebhasi kunye namaxesha athile amathoyizi ahlobisa izifanekiso ezizithe zisoloko zishiywe ngabazali abalilayo ngokukhumbula umntwana ofile.
Jizo Bosatsu ngumkhuseli wabantwana, oomama abalindayo, abacimi bomlilo kunye nabahambi. Uninzi kunabo bonke, ungumkhuseli wabantwana abafayo, kubandakanywa ukulahlekelwa ngumzimba, ukuxoshwa okanye ukukhulelwa iintsana.
Kwimbali yaseJapan, iJizo ifihla abantwana kwiingubo zakhe zokuzikhusela kwiidemon kwaye zibakhokele ekusindisweni.
Ngokomnye umxholo wabantu, abantwana abafileyo baya kuhlobo lweplatoji apho kufuneka bachithe ii-aeons bafake amatye zibe yiinqaba ukuze bazuze baze bakhululwe. Kodwa iidemon ziya kuchithachitha amatye, kwaye iindonga azizange zakhiwe.
Jizo kuphela onokuyigcina.
Njengokuba ininzi ye-bodhisattvas ehamba phambili, i-Jizo inokuvela kwiindlela ezininzi kwaye ilungele ukunceda nanini naphi na apho ifuneka khona. Phantse wonke ummandla waseJapan unesithandwa sakhe seJizo, kwaye elowo unegama kunye neziganeko ezizodwa. Ngokomzekelo, uAgonashi Jizo uphilisa izinyo. UDoroashi Jizo unceda abalimi beerayisi nezityalo zabo. UMiso Jizo ungumphathiswa wabaphengululi. I-Koyasu Jizo incedisa abasetyhini ekusebenzeni. Kukho noShogun Jizo, egqoke izixhobo zokulwa, okhusela amasosha ekulweni. Kukho lula ikhulu okanye ngaphezulu "i-Jizos" kwiJapan.
I Mizuko Ceremony
I-Mizuko Ceremony, okanye uMizuko Kuyo, ngumcimbi obeka kuMikoko Jizo. UMzuko uthetha "umntwana wasemanzini," kwaye umkhosi lowo uqhutyelwa ngokuyinhloko egameni lomntwana ongaswelekanga okanye okhulelweyo, okanye osana olusanda kuzalwa okanye oluncinane. I-Mizuko Ceremony ihamba kwixesha elilandelayo emva kweMfazwe Yehlabathi II eJapan, xa amazinga okukhipha isisu aphakama kakhulu, nangona kubakho abanye abasemandulo.
Njengengxenye yalo mthendeleko, umfanekiso wesigxina seJizzo ugqoke kwiingubo zabantwana - ngokuqhelekileyo obomvu, umbala ucinga ukuba unqande iidemon - kwaye ubekwe kwindawo yeetempile, okanye epaki ngaphandle kwetempile.
Iipaki ezinjalo zihlala zifana neendawo zokudlala zabantwana kwaye zinokuba neziqu kunye nezinye izixhobo zokudlala. Akuqhelekanga ukuba abantwana baphile epakini ngelixa abazali begqoka "i-Jizo" kwiingubo ezintsha, iimpahla zonyaka.
Encwadini yakhe ethi Jizo Bodhisattva: Guardian of Children, Travelers, kunye nabanye abahamba ngeehambo (iShambhala, 2003), uJan Chozen Bays uchaza indlela iMicro Ceremony echithwa ngayo eNtshona njengendlela yokwenza intlungu, kokubili ukulahlekelwa ngumntwana ukukhulelwa kunye nokufa okubuhlungu kwabantwana.
Imbali yeMotown kunye neyayo "Isandi"
Abathandekayo Abathandekayo Phakathi KwamaCheerleaders
Fumana i Job Skateboarding
Indlela uMgaqo-siseko woMgaqo-siseko wase-US owawufuna ngayo ukulinganisela kuRhulumente